Daawo Muuqaalkaan: Sidharth Malhotra Oo Xalay Lagu Arkay Guriga Alia Bhatt - Hablaha Media Network
Daawo Muuqaalkaan: Sidharth Malhotra Oo Xalay Lagu Arkay Guriga Alia Bhatt
HMN:- Ka dib markuu Varun Dhawan Si weyn u fashilay xiriirka ka dhaxeeyo Alia Bhatt iyo Sidharth Malhotra markuu Karan johar Su’aal weydiiyay ka dib uu fiiriyay Alia Bhatt iyo Sidharth Malhotra oo sheegay inuu la yaaban yahay Varun.
Hadaba maadaama Shalay aheyd maalinta Jaceylka aduunka Valantine’s Day waxaa wada ognahay in Dadka is jacel ay Waqti wada qaadaan.
Xalay Fiidnimadii Sidharth Malhotra ayaa lagu arkay asigoo ku sugan banaanka guriga Alia bhatt maadaama labo Baabuur ay kala wadeen hadana wey isla socdeen.
taasi waxay cadeyn u tahay in ay waqti wada qaadeen labadaan kusoo Caan baxay filimka Student Of The Year ayaa wili si rasmi uma cadeyn xiriirkooda laakiin wax walbo banaanka ayay Yaalaan.
Dhinaca shaqada Alia Bhatt ayaa u diyaarsan Filimka Varun Dhawan kula wehliyo ee Badrinath Ki Dulhania halka Sidharth sanadkaan usoo baxi doono filimka Reload waxaan kula wehliso atariishada Jacqueline Fernandez.
Muuqalka hoos ka daawo